Iifowuni ezimbini zeXiaomi ngoku ziyafumaneka ngeYoigo | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Abasebenza ngefowuni, Xiaomi
UXiaomi wenza inkqubela phambili eSpain, Oko baqala ukuvula iivenkile kunyaka ophelileyo. Abaqhubi bezinye zezinto ebezichasene nenkampani, into etshintshe iiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Kuba kwabhengezwa ukuba iifowuni zohlobo lwesiTshayina zafika eMovistar. Nangona ayizukuphela komsebenzisi apho banokuthengwa khona, kuba ukufika kwabo eYoigo ngoku kuyabhengezwa.
U-2018 ngunyaka olungileyo kwinkampani, ngokuthengisa irekhodi ukuza kuthi ga ngoku. Kwaye i ukufikelela kwizivumelwano nabaqhubi eSpain linyathelo elibalulekileyo yeXiaomi, eya kuthi ikwazi ukufikelela kubathengi abaninzi kwimakethi yesizwe. Kule meko isivumelwano sinoYoigo.
Zimbini iinombolo zefowuni zenkampani leyo inokuthengwa ngoku ngeYoigo, Zombini zisuka kuluhlu lweRedmi. Imalunga nayo Xiaomi Redmi S2 kunye Redmi 6A. Iimodeli ezimbini zexabiso elifikelelekayo, ezinokufunyanwa ngoku kunye nomqhubi, ezaziwa ngamaxabiso aphantsi. Iimodeli ezimbini zazisele zithengiswa eSpain.
Abasebenzisi babenokuzithenga kwiivenkile zorhwebo zaseTshayina, ukongeza kumanqaku athile athengisiweyo. Ithuba lokuzifumana ngoku ngeYoigo, kunokuthetha ukuba abanye abathengi baya kuba nakho ukufikelela kwezi modeli ngoku. Impembelelo entsha yenkampani eSpain.
Kuba ziimodeli ezimbini ezingabizi, ingafumaneka simahla nge-25 GB engapheliyo, enye yeerhafu ezininzi ukuba uYoigo ubonelele abathengi eSpain. Ke ukuba ubucinga ukuya kumqhubi, uneemodeli ezimbini zeXiaomi ngoku ezikhoyo ngale nqanaba.
Emva kwesivumelwano noMovistar kwaye ngoku sikunye noJoigo, siyayibona loo nto UXiaomi uyaqhubeka nokwanda kwakhe eSpain. Ayizukumangalisa into yokuba izivumelwano ezitsha zibhengezwe kwicala lakho kungekudala. Ke siya kujonga ekukhuleni kophawu lweshayina kwimarike. Ucinga ntoni ngesivumelwano sakhe nomqhubi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Abasebenza ngefowuni » Iifowuni zeXiaomi sele ziza kuYoigo